The Best Environmental Feature Award – Yangon Journalism School
The Best Environmental Feature Award
7 Day News, Vol. 17, No. 3
အညာနွေ အပူရှိန်ကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်၏ ရေလှိုင်းများပေါ်တွင် တံလျှပ်လှိုင်းများကိုပါ ထပ်၍ မြင်နေရသည်။ ထိုတံလျှပ်လှိုင်းတို့ထနေသည့် အပူရှိန်အောက် ဧရာဝတီမြစ်အလယ် သဲသောင်ပြင်ဖြူလွလွပေါ်တွင် တဲအိမ်ငယ် ငါးဆယ်ခန့်က အညာ နွေအပူကို အန်တုလျက် တည်ရှိနေသည်။
ထို့အတူ ကလေးငယ်အချို့ကလည်း အပူရှိန်ကို အန်တုလျက် သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင် ဆော့ကစားနေကြသည်။ (၅) နှစ်ခန့်အရွယ်ရှိ ကလေးငယ်နှစ်ဦးကတော့ ရေအနည်းငယ်သာရှိသည့် ရေဇလုံအတွင်းမှ ပါးဟတ် ဟစိဟစိဖြစ်ကာ အသက်ထွက်လုဖြစ်နေသည့် တစ်တောင်ခန့်ရှိ ငါးထွေ (ငထွေ) ငါးကို ဆော့ကစားနေသည်။
ထိုငါးထွေက ကလေးငယ်နှစ်ဦး၏ ဖခင်တံငါသည် နံနက်ခင်းတစ်ပိုင်းလုံး ငါးဖမ်းထွက်ခဲ့သမျှ ရရှိခဲ့သည့် တစ်ကောင်တည်းသော ငါးဖြစ်သည်။
ထိုနေရာလေးသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ မိရိုးဖလာ တံငါသည်လုပ်ငန်း တစ်ခုတည်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် မကွေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဧရာဝတီမြစ်လယ် သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှ ခုနစ်အိမ်တန်း ကျေးရွာလေးဖြစ်သည်။
ခုနစ်အိမ်တန်းကျေးရွာတွင် တံငါသည်အိမ်ခြေ ငါးဆယ်ခန့်ရှိပြီး လူဦးရေ ၂၀၀ ကျော် နေထိုင်သည်။ မိရိုးဖလာတံငါသည် လုပ်ငန်းကိုသာ အားထားလုပ်ကိုင်ပြီး ထိုလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူများအတွက် ယခု နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းကို စွန့်ခွာစေမည့် အကြောင်းအရာတစ်ရပ်က ခြိမ်းခြောက်နေသည်။ ထိုနေရာသည် ငါးသယံဇာတ ရှားပါးလာမှုပင် ဖြစ်သည်။
နှစ် ၄၀ ကျော် တံငါသည်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်သလို နှစ်စဉ် ဧရာဝတီမြစ်တွင် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လေလံရရှိခဲ့သည့် ဦးဆန်းဝင်းက ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်း ဧရာဝတီမြစ်ထဲရှိ ငါးများ တဖြည်းဖြည်း လျော့ပါးလာခဲ့သည်ကို မိရိုးဖလာ တံငါသည်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့် ရေလုပ်သားတို့ သတိထားမိသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်မှာတော့ ရောင်းတန်းဝင်ငါးဖြစ်သည့် ငါးပတ်၊ ငါးကြောင်းငါးမျိုးကို မြင်တွေ့ရန်ပင် မလွယ်တော့ဟု တံငါသည်များကဆိုသည်။
‘‘ဝမ်းပူပိုက် (ပေ ၁၅၀ ကျော် အရှည်ရှိ) နဲ့ ဖမ်းတာ အရင်က ညတစ်ခါဆွဲရင် အချိန် ၃၀ ကျော် ရပေမယ့် ခု ၁၂ ပိဿာရဖို့တောင် မလွယ်တော့ဘူး’’ ဟု ဦးဆန်းဝင်း က ငါးရနည်းလာမှုကို ပြောသည်။
ယင်းသို့ ငါးများရှားပါးလာခြင်းကို တံငါသည်တွေတင် သတိထားမိသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ မကွေးမြို့ရှိ ဈေးသည်နှင့် ဈေးဝယ်များကလည်း ဈေးများထဲတွင် သဘာဝမြစ်ငါးများ တွေ့မြင်ရနည်းလာသည်ကို သတိထားမိသည်။
မကွေးမြို့ ရန်ပယ်ဈေးတွင် ငါးရောင်းသူ နှစ်ဆယ်ကျော်ခန့် ရှိသော်လည်း အများစုက ရန်ကုန်ဘက်မှလာသည့် မွေးမြူရေး ရေခဲရိုက်ငါးများကိုသာ ရောင်းချရကြောင်း၊ ဧရာဝတီမြစ် ငါးရောင်းချသူ တစ်ဦးစ နှစ်ဦးစရှိသော်လည်း နေ့တိုင်း မတွေ့ရကြောင်း ရန်ပယ်ဈေး၌ ကုန်စိမ်းရောင်းသူ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဌေးက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၃၀ ခန့်က ဧရာဝတီမြစ်တစ်လျှောက် နေထိုင်သူများသည် မြစ်ငါးကိုသာ လတ်ဆတ်စွာ စားသုံးခဲ့ကြကြောင်း အသက် (၇၂) နှစ်ရှိ မကွေးဒေသခံ အဘွားဒေါ်လှကြည်က ဆိုသည်။
‘‘အမေတို့ ငယ်ငယ်ကဆို မြစ်ထဲမှာ လူတစ်ရပ်လောက်ရှိတဲ့ ငါးတန်ကြီးတွေတောင်မိတာ၊ လှေပေါ်တင်လို့မရဘူး၊ လှေဘေးကနေ ကပ်ချည်ပြီးဆွဲလာရတာ’’ ဟု ဒေါ်လှကြည်က ပြောသည်။
သို့ဆိုလျှင် ဧရာဝတီမြစ်တွင်းမှ ငါးများရှားပါးလာသည့် အကြောင်းရင်းကို မိရိုးဖလာတံငါသည်တို့ တွေးတောသုံးသပ်ရပြီ ဖြစ်သည်။
ငါးများ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး ပျောက်ကွယ်ရခြင်း၏ ဇာစ်မြစ်သည် ဥပဒေနှင့်မညီသည့် ငါးဖမ်းဆီးခြင်းများကြောင့်ဟု တံငါသည်အများစုက တညီတညွတ်တည်း ထောက်ပြကြသည်။ ဥပဒေနှင့်မညီသည့် ငါးဖမ်းဆီးမှုများတွင် ဝိုင်ယာရှော့ခ်တိုက်ဖမ်းခြင်းသည် အဆိုးဆုံးဖြစ်ကြောင်း တံငါသည်များကဆိုသည်။
သို့သော် ဥပဒေချိုးဖောက်၍ ငါးဖမ်းနေသူများသည် မိရိုးဖလာ ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများ မဟုတ်ဘဲ မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို ငါးများများရဖို့သာ ရည်ရွယ်ဖမ်းဆီးနေသည့် စီးပွားရေးသမားများသာ ဖြစ်သည်ဟု ခုနစ်အိမ်တန်း ကျေးရွာမှ တံငါသည်ဦးလှိုင်မင်းက သုံးသပ်သည်။
ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ငါးဝိုင်ယာရှော့ခ်တိုက် ဖမ်းနေသူတို့က အုပ်စုလိုက်ဖြစ်ကြာင်း၊ ငါးဦးစီးဌာန ခွင့်ပြုလိုင်စင်ဖြင့် လေလံယူထားသူတို့၏ နယ်မြေ (အရပ်အခေါ် နယ်သူကြီး) ပိုင်နယ်မြေများတွင် ခိုးဝင်၍ ဖမ်းကြပြီး နယ်သူကြီးက သွားရောက်တားမြစ်လျှင် အုပ်စုလိုက် ရန်စောင်ကာ ဝိုင်းရိုက်ကြကြောင်း ဦးလှိုင်မင်းကပြောသည်။
‘‘နိုင်ငံတော်ခွင့်မပြုတဲ့ လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်သေးတယ်။ မိုက်ကြေးခွဲတဲ့ ပုံစံမျိုးလည်း လုပ်သေးတယ်’’ ဟု နယ်သူကြီးဦးဆန်းဝင်းက မကျေမနပ်နှင့်ပြောသည်။
ဝိုင်ယာရှော့ခ်တိုက်ကာ ငါးဖမ်းသည့်အုပ်စုများတွင် ဂျင်ဂလိ (လေးခွဖြင့်ပစ်ရသည့် သံစူးမြား) များပါသည်။ တုတ်၊ ဓားလက်နက်များ ပါသည်။ အသိပေး တိုင်ကြားလျှင်လည်း တာဝန်ရှိသူနှင့် ရဲတပ်သားသုံးဦးခန့်ဖြင့် သွားရောက် ဖမ်းဆီးရန် မလွယ်ကူကြောင်း တံငါသည်များကပြောသည်။
‘‘လာဖမ်းတဲ့သူတွေမှာ ရဲပစ်မိန့်မပါဘူးဗျ။ သေနတ်နဲ့ချိန်နေရုံနဲ့ ဟိုကမကြောက်ဘူး။ ဝိုင်းလိုက်ရင် ထွက်ပြေးရတာပဲ’’ ဟု ဦးဆန်းဝင်းက ပြောသည်။
ဧရာဝတီမြစ်တွင် လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာရှော့ခ်တိုက်၍ ငါးဖမ်းနေသည့် ပိုက်ကွန်များသည် အလံ ခုနစ်ဆယ် (ပေ ၂၀၀ကျော်) အရှည်ရှိပြီး ပိုက်ကွန်တွင် ဝိုင်ယာကြိုးများ တပ်ဆင်ထားကာ ဘက်ထရီအိုးကြီးများဖြင့် ရှော့ခ်တိုက်၍ ဖမ်းဆီးကြောင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဒိုင်နမိုကို စက်လှေအင်ဂျင်ဖြင့် မောင်း၍ပင် ရှော့ခ်တိုက်ကြောင်း မိရိုးဖလာ တံငါသည်များက ပြောသည်။
‘‘ရှော့ခ်တိုက်လိုက်ရင် ပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ ငါးနဲ့ ရေနေသတ္တဝါ အကုန်သေတယ်။ ပိုက်ထဲမမိတဲ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင် ၁၀ ကိုက် ကျော်အတွင်း ငါးတွေပါ အကုန် သေတာပဲ။ ငါးဥချရင် ဥတွေပါ ကန်းကုန်တယ်’’ ဟု အသက်(၆၇) နှစ်အရွယ်ရှိ တံငါသည် ဦးတင်က ပြောသည်။
ငါးရစ်၊ ငါးသန်ချိန်၊ ငါးဥချိန် မေလမှ ဇွန်လအထိ တံငါသည်များသည် ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို သုံးလနားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထိုအချိန်တွင် ငါးဖမ်းခွင့်လေလံရသူ (နယ်သူကြီး) တို့နှင့် မိရိုးဖလာငါးဖမ်းသူတို့က ငါးမဖမ်းတော့ဘဲ စည်းကမ်းလိုက်နာကြသည်။ ၎င်းတို့ရှေ့ရေးအတွက် ငါးများ ပြန်လည်ပေါက်ဖွားလာရန် လိုအပ်သည်ကို တံငါသည် ဘိုးဘွားများလက်ထက်ကတိုင် သင်ကြားပေးပြီးဖြစ်သည်။
သို့သော် ဝိုင်ယာရှော့ခ်ဖြင့် ငါးခိုးဖမ်းသူများက ဒေသခံတံငါသည်များ၊ နယ်သူကြီးများ မရှိတော့သဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ရှော့ခ်တိုက်ဖမ်းခွင့်ရသလို ဖြစ်သွားသည်ဟု ဦးဆန်းဝင်းကဆိုသည်။
‘‘သုံးလနားပြီးလို့ ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖမ်းပြီဆိုရင် ဒီဝိုင်ယာရှော့ခ်သမားတွေ ဘယ်လောက်လုပ်သွားသလဲဆို ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆွဲရင် ငါးအရှင်တစ်ကောင်မှ မပါဘူး။ အကုန်ငါးအသေတွေချည်းပဲ။ ပုပ်စော်တွေကို နံလု့ိ’’ ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ထိုသို့ ရှော့ခ်တိုက်ငါးဖမ်းခြင်းအပြင် ငါးသယံဇာတရှားပါးလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အခြားအကြောင်းရင်းများလည်း ရှိနေသည်။
ဧရာဝတီအနောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (AWDO) တာဝန်ခံ ဦးသန့်ဇင်က ငါးများ ရှားပါးလာပြီး ပြုန်းတီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းရင်းများတွင် ဂေဟစနစ် ပျက်စီးမှု၊ မြစ်ချောင်းများအတွင်း စွန့်ပစ်ဓာတုပစ္စည်းများ ပျော်ဝင်နေမှုများလာခြင်းက အကြောင်း အရင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ပါဝင်သည်ဟု ထောက်ပြသည်။
ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်း ဟုမ္မလင်းဘက်တွင် ရွှေတူးဖော်ခြင်း၊ မိုင်းခွဲလုပ်ကွက်များလုပ်ခြင်းမှ မြေစာနှင့် သန့်စင်ဓာတုပစ္စည်းများ မြစ်ထဲသို့ စီးဝင်သလို ဧရာဝတီ မြစ်တစ်လျှောက် ရေနံမြေများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများလည်း မြစ်ထဲ၌သာ စွန့်ပစ်သဖြင့် ရေညစ်ညမ်းကာ ငါးမျိုးများ ပြုန်းတီးစေသည်ဟု ဆိုသည်။
ရေနံမြေများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ အနည်းငယ်သာရှိသည်ဟု ပြောသော်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာရှည်ပြီဖြစ်သဖြင့် ရေ ညစ်ညမ်းသလို ရွှေတူးဖော်ခြင်း၊ ကြေးနီထုတ်လုပ်၍ ချောင်းများတွင် အက်စစ်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ မျောပါခြင်း စသည့် အဘက်ဘက်မှ အညစ်အကြေးနှင့် ဓာတုပစ္စည်းစီးဝင်မှုက မြစ်ကို ထိခိုက်စေပြီး ရေနေသတ္တဝါများ ပြုန်းတီးစေသည်ဟု ဦးသန့်ဇင်က ထောက်ပြ ပြောဆိုသည်။
‘‘ဆင်ကိုအပ်နဲ့ ထိုးတာလောက်တော့ မနာပါဘူးလို့ဆိုပေမယ့် အများကြီး အဘက်ဘက်က ဝိုင်းထိုးကြရင် အဲဒီဆင်လည်း ဘယ်ခံနိုင်ပါ့မလဲ’’ ဟု ဦးသန့်ဇင်က မြစ်၊ ချောင်းများ ပျက်စီးလာစေရန် အဘက်ဘက်မှ တိုက်ခိုက်နေပုံကို ဥပမာပေး၍ ပြောဆိုသည်။
မြစ်ချောင်းများကို ထိခိုက်လျှင် ရေနေသတ္တဝါများလည်း ထိခိုက်သေကျေစေမည်ဖြစ်ပြီး ရေနေသတ္တဝါများ ထိခိုက်သေကျေပျက်စီးပါက မြစ်၊ ချောင်းများ ပိုမိုညစ်ညမ်းလာကာ မြစ်၊ ချောင်းတိမ်ကောမှုများဖြစ်လာကြောင်း၊ ယင်းသည် ဂေဟစနစ် ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးသန့်ဇင်က ဆိုသည်။
မြစ်အတွင်း စီးဝင်သည့် ချောင်းများတွင် ချောင်းအပြည့် ပိုက်တားဖမ်းခြင်း၊ ဝိုင်ယာရှော့ခ်တိုက်ဖမ်းခြင်းများက ငါးမျိုးသုဉ်းစေသည့် အချက်တစ်ချက်အဖြစ် ဦးသန့်ဇင်က လက်ခံသည်။ ယင်း အကြောင်းအချက်များက ရေနေသတ္တဝါတို့ ပြုန်းတီးရန် တိုက်ခိုက်နေသည်ဟု ၎င်းကမြင်သည်။
အထက်ပါအချက်များအပြင် ကမ်းပါးပြိုခြင်း၊ မြစ်ကြောင်း ပြောင်းလဲခြင်းများသည် ငါးသယံဇာတရှားပါးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ဦးသန့်ဇင်က ပြောသည်။
ငါးများသည် ကျောက်ဆောင်ဂလိုင်များ၊ ကမ်းပါးများတွင် အမှီပြု၍ ရှင်သန်သားပေါက်သဖြင့် ကမ်းပါးပြိုခြင်း၊ မြစ်ကြောင်းပြောင်းလဲလာခြင်းများသည် ငါးတို့၏ သဘာဝတည်နေရာများ ပျက်စီးစေကာ ရှင်သန်မှုကို ထိခိုက်စေကြောင်း ၎င်းကပြော သည်။
သို့ဖြစ်ရာ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများသည် လျော့ပါးသွားသည့် ငါးများအတွက် အစားထိုးနိုင်ရန် ငါးသားပေါက်များကို နှစ်စဉ် လွှတ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေသည်။
ငါးဦးစီးဌာနက မကွေးတိုင်းအတွင်း လေးနေရာတွင် ငါးမြစ်ချင်းသားပေါက် ငါးသန်းကျော် လွှတ်ပေးနေပြီး ဧရာဝတီအနောက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (AWDO) က ယမန်နှစ်က ပွင့်ဖြူ မြို့နယ်တွင် ငါးသားပေါက် တစ်သန်း လွှတ်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
‘‘ငါးသားပေါက်တွေ လွှတ်ပေးပြီး ငါးမဖမ်းရသုံးလကို ကြပ်မတ်တယ်။ အသိပညာပေးတယ်။ သုံးလပြီးတော့ ငါးတွေ သိသိသာသာ ပြန်ပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်။ ညီညီညာညာ ထိန်းသိမ်းမယ်ဆို ဖြစ်လာနိုင်သေးတာ တွေ့ရတယ်’’ ဟု ဦးသန့်ဇင်ကဆိုသည်။
ထိုသို့ ငါးသားပေါက်များ လွှတ်ပေးနေသလို တစ်ဖက်တွင် ဥပဒေချိုးဖောက်၍ ငါးဖမ်းဆီးမှုများ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု မကွေးတိုင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန တိုင်းဦးစီးမှူး ဦးမောင်ချစ်က ပြောသည်။
၂၀၁၇ တွင် ငါးရစ်၊ ငါးသန် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနှင့် ဘက်ထရီ ရှော့ခ်တိုက် ငါးဖမ်းခြင်းအတွက် ပိုင်ရှင်မဲ့ ဖမ်းဆီးရမိမှု ၁၇ မှုနှင့် တရားစွဲဆိုမှု ၁၆ မှု ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ တွင် ငါးရစ်၊ ငါးသန် ကာလ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဘက်ထရီရှော့ခ်တိုက် ဖမ်းဆီးမှုများအတွက် ပိုင်ရှင်မဲ့ ဖမ်းဆီးရမိမှု ၁၉ မှုနှင့် တရားစွဲဆိုမှု နှစ်မှုရှိသည်။
သို့သော် ရှော့ခ်တိုက် ငါးဖမ်းနေမှုကို တာဝန်ရှိသူများက စစ်ဆေးအရေးယူမှုကို လက်ရှိထက် ပိုမိုတိုးတက်စေလိုကြောင်း မိရိုးဖလာတံငါသည်များက ဆိုသည်။
ဒေသတွင်း အုပ်စုဖွဲ့၍ ဝိုင်ယာရှော့ခ်တိုက် ငါးခိုးဖမ်းနေသူများ၏ အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာများကိုပါ ဒေသခံတံငါသည်များနှင့် နယ်သူကြီးတို့က သိကြသည်။ ထ့ိုကြောင့် သက်ဆိုင်သည့် ဌာနနှင့် ရဲစခန်းသို့ အသိပေးတိုင်ကြားသော်လည်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းအင်အားနည်းပါးမှုနှင့် ရဲတပ်သားသုံးဦးခန့်သာ ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် အုပ်စုဖွဲ့၍ ဝိုင်ယာရှော့ခ်တိုက်ဖမ်းနေသူများကို အရေးယူရန်နှင့် ဖမ်းဆီးရန် အခက်အခဲများရှိနေသည်ဟု ဦးဆန်းဝင်းက ပြောသည်။
‘‘တကယ့်ပင်မအုပ်စုကြီးတွေကို မဖမ်းနိုင်ဘူး တကယ်ဖမ်းမိတာက နည်းနည်းပါးပါးလုပ်စားတဲ့ကလေးတွေပဲ ဖမ်းမိတာ’’ ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မကွေးဒေသခံ အဘွား ဒေါ်လှကြည်တို့ငယ်ရွယ်စဉ်က ဧရာဝတီမြစ်တွင် ငါးများပေါများသည်။ မြစ်လေလံလည်းမရှိ၊ သူ့ထက်ငါလုယက်၊ ခိုးဝှက်ဖမ်းစရာလည်းမလို၊ ငါးများပေါသဖြင့် ကုန်အောင်ဖမ်းလျှင်လည်း ရောင်းချရန် လူဦးရေနည်းပါးသဖြင့် ဈေးကွက်လည်းမရှိ၊ တစ်နေ့စာအတွက်သာ ဖမ်းသည်ဟု ပြောသည်။
ယခုအချိန်တွင် မြစ်ငါးတွင် တန်းဝင်သည့် ငါးတန်၊ ငါးပတ်၊ ငါးကြောင်း၊ စသည့်ငါးမျိုးများကို မြင်ရတွေ့ရခဲသည်။ ထို့ကြောင့် စားသုံးသူများသည် ရန်ကုန်မှလာသည့် ရေခဲရိုက်မွေးမြူရေးငါးများသာ စားနေရသည်ဟု ဒေါ်လှကြည်က ပြောသည်။
ထိုသို့ ငါးရှားလာခြင်းကြောင့် မကွေးတိုင်းမှ စာသုံးသူများ အဆင်ပြေစေရန် ဧက ၅၀ခန့် အကျယ်အဝန်းအသုံးပြု၍ ငါးမွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်ရန် တိုင်ပင်နေသည်ဟု မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုက ဆိုထားသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ငါးများ ရှားပါးလာပြီ ဖြစ်သည်။ ငါးများရှားပါးလာခြင်းနှင့်အတူ တံငါသည်ရေလုပ်သားတို့၏ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် ငါးရရှိမှုနည်းလာ၍ ရေလုပ်သားများ၏ ဝင်ငွေလျော့ကျကုန်သည်။
ဌာနဆိုင်ရာတို့၏ ကြေညာချက်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တို့၏ သုံးသပ်ချက်များအပေါ်တွင် မိရိုးဖလာ တံငါသည်တို့က စောဒကမတက်ကြပေ။ သို့သော် တံငါတို့၏အမြင် လက်တွေ့ဖြတ်သန်းမှုတွင် ငါးများ ရှားပါးလာရခြင်းသည် ဝိုင်ယာရှော့ခ်တိုက်ဖမ်းဆီးနေခြင်းက အဓိကတရားခံဖြစ်လေသည်။
‘‘ငါးတွေကို ဒီကောင်တွေ အကုန်သတ်ပစ်ကြတာ’’ ဟု ဦးဆန်းဝင်းက ဝိုင်ယာရှော့ခ်တိုက် ငါးဖမ်းနေသည့်အဖွဲ့များအား ရည်ညွှန်း၍ ဒေါသသံဖြင့်ပြောသည်။
ငါးသယံဇာတ ရှားပါးလာခြင်းကြောင့် နောင်သုံးနှစ်တွင် မိရိုးဖလာတံငါလုပ်ငန်းကို စွန့်လွှတ်ရတော့မည်ဟု ဦးဆန်းဝင်းက သက်ပြင်းချ၍ ပြောသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကတော့ ကြိုးစား၍ စီးဆင်းမြဲ စီးဆင်းနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ သူ၏ ကျန်ရှိနေသေးသည့် သယံဇာတများကို လူများအတွက် တတ်နိုင်သမျှ ပေးဆပ်နေဦးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြစ်ကြီး ဧရာဝတီ၏ ရင်သွေးများဟုဆိုနိုင်သော ငါးတို့၏ သွားရာလမ်းကတော့ ဓာတုပစ္စည်းအဆိပ်ရည်စီးမျောကြောင်းများ၊ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းများကြား မျိုးသုဉ်းလု ဖြစ်နေလေပြီ။